सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न विदेशी पाहुनाकै साइत कुर्नुपर्ने हाे, सरकार ! « News24 : Premium News Channel
सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न विदेशी पाहुनाकै साइत कुर्नुपर्ने हाे, सरकार !
काठमाडौं । गत भदौ १४ र १५ गते भएकाे बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालका खाडीका देशहरूको प्रयास (बिमस्टेक) शिखर सम्मेलनमा काठमाडौंलार्इ चिरिच्याट्ट पारिएकाे थियाे । बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा काठमाडाैंकाे मुख्य सडकका खाल्डाखुल्डी रातारात पुरियाे । सडकका भित्तामा रंगरोगन गरियाे । विदेशि पाहुनालार्इ देखाउनकै लागि भए पनि काठमाडाैंलार्इ चिरिच्याट्ट पारिएकाे थियाे ।